1 အဘို့ရလဒ် cha ching
ပုံမှန်ပြပွဲစီးနင်း em rigby
ပုံမှန် Show ကိုစီးနင် Em Rigby ။ ဒီပုံမှန်ပြသပါဂိမ်းထဲမှာ, Benson နောက်ဆုံး Rigby ကိုချွတ် goofing နှင့်အတူတက်တိုက်ကျွေးဆည်းပူးခဲ့သည်, သူသည် Rigby ရဲ့ဆရာအဖြစ်ကြွက်သားက Man တာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်။ Rigby ကို mentorship အစီအစဉ်ပြီးအောင်မနိုင်လျှင်, သူပစ်ခတ်င်! Rigby ချစ်လှစွာသောအဘို့ဆွဲထားကိုကူညီပါ
ဒီအစွန်းရောက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad စက်ဘီး onboard ခုန်နှင့်အချို့သောကြီးမြတ် position နဲ့ဆက်ဆံအဲဒီတောင်ကုန်းနှင့်ဆွဲရ
Naruto ကိုသငျသညျအရူးမှသူ့အရိပ်ကိုယ်ပွား jutsu ကိုအသုံးမခံပါနဲ့။ သင့်အနေဖြင့်စစ်မှန်သော Naruto ကိုရှာပြီးအရိပ် Clone ရှောင်ရှားရန်ရှိသည်!
အ bike.In ပေါ်တွင်ပိုးဟပ်နှင့်အတူ Oggy စွန့်စားမှုအားလုံး Oggy စိန်ခေါ်မှုမှ 8 အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်, Oggy ရှိသမျှကိုအဆင့်ဆင့်သွားတော်ကကူညီပေးပါ။